Home » Vaovao momba ny dia an-tserasera » Tsy misy mpamadika, fa maherifon'ny fizahantany: HE David Collado, minisitry ny fizahan-tany Dominikana
HE David Collado iMin Fizahan-tany any amin'ny Repoblika Dominikanina (havia)
IZAO David Collado dia nahatsapa ny maha-zava-dehibe ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fizahantany sy ny fizahan-tany. Nahavita ny tsara izy tamin'ny lesoka natosika azy nefa tsy tsapany ary izy dia ao amin'ny lisitry ny Maherifo momba ny fizahantany ho an'ny WTN.
omaly, eTurboNews nitatitra momba ny UNWTO te-handoto sabotsy ny fihaonana an-tampon'ny WTTC any Cancun hatao ny 25 ka hatramin'ny 28 aprily.
Tratry ny afo tamin'ity andrana miharihary nataon'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO Zurab Pololikashvili hamely tampoka ny indostrian'ny tsy miankina ity tamin'ny alàlan'ny fanizingizinana fa hisy hetsika minisitra UNWTO kasaina amin'ny andro mitovy amin'ny Fihaonamben'ny WTTC any Cancun, ny Host, ny Hon. Ny minisitry ny fizahan-tany ho an'ny Repoblika Dominikanina, David Collado, dia nanome toky androany fa hafindra ny daty nofaritan'ny UNWTO.
Ny minisitra tamin'ny antso an-tariby niaraka tamin'i Gloria Guevara, tale jeneralin'ny World Travel & Tourism Council (WTTC) dia nanasongadina ihany koa ny maha-zava-dehibe ny fiaraha-miasa amin'ny daholobe sy ny sehatra tsy miankina amin'ny fandrindrana ny ezaka atao amin'ny alàlan'ny krizy COVID-19.
Indostria lehibe ny fizahan-tany ho an'ny Repoblika Dominikanina.
eTurboNews niantso ny minisiteran'ny fizahantany any amin'ny Repoblika Dominikanina androany ary nahazo fanamafisana momba ny daty nafindra. Azonao atao ny mihaino ny ampahan'ity antso an-tariby ity ao amin'ilay horonantsary You Tube tafiditra.
Dr. Peter Tarlow, mpiara-miasa amin'ny World Tourism Network, anio no hanolotra an'i HE David Collado handray ny Loka mahery fo an'ny fizahantany WTN noho ny fahitany ary amin'ny fisorohana ny fifanolanana amin'ny WTTC sy ny sehatra tsy miankina. Ao amin'ilay horonan-tsary natsofoka dia nanantitrantitra indray i Dr. Tarlow fa zava-dehibe ny hiarahan'ny mpilalao fizahan-tany rehetra miasa. Nanampy toy izao ny filohan'ny WTN Juergen Steinmetz: “Izahay ao amin'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany mahatakatra ny maha-zava-dehibe ny fiaraha-miasa rehetra. Ny tanjonay dia ny hanampy ireo orinasa antonony sy madinidinika, ary ny tanjon'ny WTTC dia ny handrindra ireo hetsika ho an'ireo orinasa tsy miankina matanjaka indrindra eto an-tany. Izahay rehetra dia mijery ny sehatra ho an'ny daholobe ho mpiara-miombon'antoka ary samy eo amin'ny lafiny fitarihana fa tsy mpifaninana. ”